Maqaal: Maxay tahay sababta 3 jeer dib loogu dhigay dhismaha xukuumadda Jubbaland? | dhanaanmedia.com
Maqaal: Maxay tahay sababta 3 jeer dib loogu dhigay dhismaha xukuumadda Jubbaland?
December 31, 2015 // D M5 // News2258 Views
Jubaland wax xukuumad ah ma laha, laga soo bilaabo 15-kii bishii sideedaad ee sanadkan, xilligaasoo la doortay madaxweyne Axmed, lagana sugayay in uu si degdeg ah ku soo dhiso xukuumad tayo leh. 21 casho ayuu dastuurka u ogolaa madaxweyneaha, hase ahaatee ma awoodin, waxaana 30-kii bishan desember markii 3-aad loo kordhiyay waqtiga uu ku soo dhisayo xukuumaddiisa, taasoo sadex bilood ah,kuna eg shanta bisha April sanadka 2016.
Waxaa dad badan fajiciso ku noqotay ka dib markii 30-kii bisha desember sanadka 2015 Kismaayo looga dhawaaqay in dhismihii xukuumadii ugu horesay ee ay yeelan lahayd Jubbaland, tan intii ay ka baxday ku meel gaarka dib loo dhigay markii sadexaad (3-aad). Baarlamaanka Jubbaland oo isku deyay in uu arinkan u kitaaba deyo ayaa ku dhoobeystay arimo badan, ka dib markii uu saxaafadda soo geliyay warqad laga soo buuxiyay doodo aan macquul ahayn, islamarkaana aan lagu qanci karin.
Qoraal 30 12 2015 ka soo baxay baarlamaanka ayaa lagu sheegay sababta madaxweynaha u soo dhisi waayay xukuumadda, waxaana qaraalkaas lagu sheegay in madaxweynaha ku mashquulay arimo dib u heshiineed, sida safarkii dhowrka maalmood qaatay ee uu ku tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Dhanka kale dib u heshiisiintii mudada dheer qaadatay ee Gaalkacyo , iyo weliba labadii shir ee ku saabsanaa hiigsiga 2016 ee ka dhacay Muqdisho ayaa qoraalka lagu sheegay in madaxweynaha uu waqtibadan kaga lumay.
Arinka aadka u xiisaha badan ayaa ah in qoraalka lagu sheegay, in xilligan la joogo madaxweynaha safar dib u heshiisiineed ugu ambabixi doono gobolada dhexe ee dalka, gaar ahaan magaalada Cadaado ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa halkaas ka bilaabi doona howlo uu ku heshiisiinayo Puntland iyo Galmudug, sidoo kale Ahlu sunna iyo Galmudug, howlahaas oo sida la fahmi karo u bahan doona waqti aad u badan. Intaa ka dib madaxweyne Axmed waxuu qorsheynayaa gogol turxaan bixin ah oo ka dhici doonta magaalada Kismaayo, gogoshaasoy isku uur-xaaran doonaan dhammaan dhinacyadan kor ku xusan.
Ma cada in madaxweynaha sidoo kale dhexdhaxaadin doono muranada ka aloosan Hiiraan iyo Shbeelada dhexe, sidoo kale, dagaalada ka socda shabeelada hoose, iyo weliba muranka u dhexeeya maamullada Koonfurgalbeed iyo Bakool sare.
Hadaba akhristow marka laisku biiriyo dhammaan arimahaas, waxaa soo baxaya in aan la hubi karin in madaxweyne Axmed xukuumad soo dhisi doono marka la gaaro shanta bisha April 2016, waxayna u badan tahay in mar afaraad uu codsado in waqtiga loogu daro.